Soomaali lagu dilay London - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Abriil, 2013, 01:37 GMT 04:37 SGA
Magaaladan London waxaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay lagu dilay tiro dhallinyaro asalkoodu Soomaali yahay. Sababta dilalkaasi weli ma cadda, waxaana baaritaanno ku haya boliiska magaaladan London oo soo qabtay qaar ka mid ah dadka lagu tuhmay.
Magaaladan London waxaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay lagu dilay tiro dhallinyaro asalkoodu Soomaali yahay.
Sababta dilalkaasi weli ma cadda, waxaana baaritaanno ku haya boliiska magaaladan London oo durbadiiba soo qabtay qaar ka mid ah dadka lagu tuhunsan yahay inay dilalkaas geysteen.
Cabdi Xuseen Muumin waa aabbaha mid ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee la dilay.
Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa weydiiyay sida wiilkiisa loo dilay.